Kônferansa Momba ny Soratra 2018 - Lohahevitra
Haiforona literatiora ankehitriny
Resahina sy vahavahana eto ny tontolon’ny literatiora malagasy taorian’ny taona 1991, izay faritana ho vanim-ptoanan’ny fahalalahana. Aseho koa ireo endrika enina mampiavaka ny literatiora tamin'ity vanim-potoana ity dia ny: tantara an’onjam-peo, riankalo, tôkalo, tôkadriàgna, slam, ary ny sôvaramita.
Hovoaboasana ao amin’ity andrana fanadihadiana ity ny fiheverana nolovain-jafy fa maha poezia ny poezia sy ny fivaonana fahita ankehitriny ary ny mety ho vokany eo amin’ny fivoaran’ny tononkalo malagasy.
Esther Nirina sy ny Simple Voyelle
Havoitra eto amin’ity fanadihadiana ity dia ny fiforonan’aina sy famelomana, tarafina amin’ny endrika maro avy ao amin’ny asa soratr'i Esther Nirina Simple Voyelle.
Teknika sy vahaolana
Mila tetika sy pôlitika maty paika ny fiarovana ny teny Malagasy satria mariky ny fiandrianam-pirenena izy no sady antoky ny fihavanana mirindra rahateo. Mila tsaboana satria marary sy efa mandamaka am-pandriana. Aroso eto amin'ity fanadihadiana ity ireo teknika mahomby entina itsaboana sy ameloman'aina ny teny Malagasy.
Mpanoratry ny Taona
Haroso sy hazavaina eto ireo fitsipika vaovao ampiharina momba ny fifidianana Mpanoratry ny Taona.